संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रै लैंगिक विभेद ! |
संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रै लैंगिक विभेद !
प्रकाशित मिति :2016-08-05 13:23:40
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालय संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अङ्ग हो, सचिवालयमा महासचिवको भूमिका प्रमुख हुने गर्दछ। महासचिवले वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख प्रवक्ता र प्रमुख नेताको काम गर्दछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा महिलाले महासचिव हुने अवसर पाएका छैनन्। ७० वर्षे संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा अहिलेसम्म ८ जना महासचिव रहिसकेका छन्, तर अहिलेसम्म सवै पुरुषमात्रै छन्।
महासचिव निर्वाचन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको अहिलेसम्मको परम्परा हेर्दा यो एकपछि अर्कोलाई पालो (Regional rotation) दिने सिद्धान्तमा आधारित छ । सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको नयाँ महासचिवका लागि निर्वाचन हुँदैछ । अव महासचिवको पद पाउने पालो पुर्वी यूरोपको हो । महासचिव पदमा महिला हुनुपर्छ भन्ने धारणा विश्वव्यापी रुप मै जोडतोडले उठिरहेको छ । धेरैजसो देशले यसलाई कडा रुपमा समर्थन गरेका छन् ।
गत जुलाई २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदले महासचिवको उम्मेद्वारीका लागि पहिलो चरणको अनौपचारिक निर्वाचन गरेको छ । उक्त निर्वाचनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ कै इतिहासमा पहिलोपटक ५० प्रतिशत भन्दा धेरै उम्मेद्वारी महिलाको परेको थियो । १३ जना उम्मेद्वारमध्ये ७ जना महिला थिए । तर मतदानमा फेरि पुरानै इतिहास दोहोरिएको छ, पुरुष उम्मेद्वारले महिलाको भन्दा राम्रो मत ल्याएका छन्। दौडमा रहेका प्रमुख ५ जनामा एकजना महिला यूनेस्कोकी प्रमुख ईरीना बोकोभोमात्र तेस्रो स्थानमा परेकी छन् । बाँकी ४ जना महिला सूचीको तल्लो स्थानमा परेका छन् । यूनेस्को प्रमुख बोकोभोले ९ वटा इनकरेज भोट र ४ वटा डिसकरेज भोट पाएकी थिइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुख तथा न्यूजिल्यान्डका पुर्व प्रधानमन्त्री हेलन कलर्क प्रथम तीन स्थानमा आउन सकिनन् । उनी प्रबल दावेदारको सूचीमा छैंटौ स्थानमा परिन् । उनले ८ इनकरेज भोट र ५ डिसकरेज भोट पाएकी थिइन्। अर्जेण्टिनाकी विदेशमन्त्री शुशना माकोरा ८ अौ र क्रिस्टियाना फिगरर ९ अौ स्थानमा आए । क्रिस्टियाना फिगरर यूएन फ्रेमवर्क कनभेन्सन अन क्लाइमेट चेन्जकी एक सफल प्रमुख थिइन्। प्रथम ५ जना प्रबल दावेदारमा ४ जना पुर्वी यूरोपबाट रहेका छन्।
यो परिणामले लैङ्गिक विभेदको प्रश्न खडा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवमा महिला छानिनुपर्ने र महिलावादीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अग्रसर गराउनुपर्छ भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा नागरिक समाजबाट ज्ञापनपत्रहरू आएका छन् । ६० वटा सदस्य राष्ट्रले यसकालागि दबाव दिनुका साथै ५० जना संयुक्त राष्ट्रसंघका विषेशज्ञ तथा पुर्व नेताहरूले हस्ताक्षर समेत बुझाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले संस्थाभित्र आफ्ना कर्मचारी र काममा लैङ्गिक समानतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, तर जुन कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लैङ्गिक समानताका लागि कुनै पनि आरक्षणको व्यवस्था छैन् । कर्मचारी बढुवाका लागि द्वन्द्वग्रस्त ठाँउमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र जहाँ परिवारसँग सम्पर्कका लागि अनुमति दिइएको हुँदैन, जसले परिवार तथा बालबच्चा भएका महिलालाई विभेद गर्दछ। यसले महिलालाई माथिल्लो र ठुलो पदका लागि अगाडि बढ्नका लागि रोकेको वेलायतको एक वेवसाइट अपन डेमोक्रेसी डट नेटमा उल्लेख छ ।
‘अब संसारमा धेरैले संयुक्त राष्ट्रसंघ परिवर्तन खोजेका छन्। अब पुरानो परम्परालाई तोड्दै महासचिवमा महिला आउन आवश्यक छ जसले संयुक्त राष्ट्रसंघमामात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा लैङ्गिक समानतालाई प्रोत्साहन गर्न मद्दत पुर्याआउनेछ । सुरक्षा परिषदका सदस्यले चाहेमा यो हुनसक्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघ अब २१ अौ शताब्दिको हो भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ’ वेवसाइटमा भनिएको छ।